Kenye ọrụ "mgbapụ" na igodo igodo | Esi m mac
Kenye ọrụ "mgbapụ" na igodo a kpọrọ aha na keyboard
Otu n’ime ihe ngosi ọhụrụ nke 2016 MacBook Pros nke emere na Nọvemba gara aga bụ nnabata nke igodo “ụzọ mgbapụ” na Touch Bar. Ihe a Apple mere mere ụfọdụ esemokwu. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ịnwe nchebe nke ịpị igodo, kama n'elu elu na-enweghị ahụ efe, ebe ọ bụ na ụbụrụ anyị metụtara ọrụ a na ịmalite usoro. O doro anya na ọ bụ ihe dị ụtọ na na nke kachasị mma, ọ chọrọ usoro mmegharị nke ga-adabere na oge awa nke Mac anyị. Na MacOS Sierra, anyị nwere ike ekenye ọrụ "mgbapụ" na igodo ụfọdụ iji nọrọ jụụ na anyị na-eme ihe achọrọ.
Dịka isi mmalite, kwuo na ọrụ a anyị ga-ahụ ugbu a, abụghị ihe pụrụ iche maka ụdị nwere Touch Bar, ebe ọ dị na Mac ọ bụla MacOS Sierra arụnyere. N'ezie, anyị ga-enwerịrị ụdị nke sistemụ arụmọrụ anyị kachasị ọhụrụ.
Site n'ebe ahụ, anyị ga-enweta ya usoro mmasị. Ọ bụrụ na ịnweghị ụzọ mkpirisi, ana m akwado ịnweta ya site na akara ngosi apụl  nke dị n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo anyị. N'ime mmasị, anyị na-enweta kiiboodu akara ngosi ma chọta taabụ kiiboodu.
N'okpuru aka nri, anyị na-ahụ nhọrọ: igodo mmegharị. Mgbe ị na-abanye, menu ọzọ ga-emepe, na ohere ikenye ọrụ ọzọ na igodo ndị a: Mkpọchi Mkpọchi, Njikwa, Nhọrọ, na Iwu. Ya mere, site na ịpị ndọpụta ahụ, anyị nwere ike igosi na igodo ndị gara aga nwere omume ndị a: mkpọchi mkpọchi, njikwa, nhọrọ na iwu na ESC.
Ya mere, n'ime ihe atụ anyị, anyị ekenyela nhọrọ "mgbapụ" na igodo njikwa. Anyị enyochala na nke a pụtara site na imeghe Ọnụ Ọgụgụ na ịpị bọtịnụ ahụ fanye ọrụ. Mgbe ahụ, anyị pịa igodo kenyere «ụzọ mgbapụ» na ọrụ kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Kenye ọrụ "mgbapụ" na igodo a kpọrọ aha na keyboard
Enweelarị ụzọ mgbapụ na keyboard. Kedu ihe kpatara ekenye ọrụ a na igodo ọzọ?
Ihe ọhụrụ maka ndị ọrụ 2016 MacBook Pro